Kuunza mota kubva kuItaly kuenda kuUK | Yangu Mota Kunze
Kuunza mota kubva kuItaly kuenda kuUK
Maitiro ekupinza mota yangu kubva kuItaly kuenda kuUK akafamba mushe mushe, nekuda kwevashandi veMyCarImport avo vaibatsira zvakanyanya uye vanoshanda. Kuve kuri kuburikidza neyakagadziriswa mota kupinza pamberi muEurope zvainetsa zvisingaite, zvichidya nguva tisingatauri zvinodhura, izvi zvakaenda senge kurota! Kutenda nekutenda kune vese vanobatanidzwa.
- Audi A4 Avant 2.0 Diesel yakambonyoreswa muItari
Kuwana mota yako kuUnited Kingdom kubva kuItari
Isu tiri nyanzvi mune zvekushandisa uye tinogona kubatsira nekupinza mota yako kuUnited Kingdom kubva kuItari zvakachengeteka.
Kana mota yako yatove muUnited Kingdom, unogona kuunza nayo kunzvimbo yedu kuti mabasa anodikanwa apedziswe kana isu tinogona kure kuresa kunyoresa mota yako kana basa rinodiwa ratove rapera. Nekudaro, kana iwe uchida kutakurwa kwemotokari yako kuenda kuUnited Kingdom kune nzira dzakasiyana dzakasiyana dzekutakura dzinogona kushandiswa.
Zvichienderana nezvamunoda, mota inogona kutakurwa kupinda mukati kuenda kuchiteshi, kana kutakurwa nzira yese pane anotakura mota. Yedu mota logistics mhinduro dzakanangana nemotokari yako, saka pinda mukutaurirana kuitira kuti tinzwisise zvirinani zvaunoda.
Yakawanda sei mutero yauchazoda kubhadhara kupinza mota yako kubva kuItari?
Kana uchipinza mota kubva kuItaly kuenda kuUK zvinokwanisika kuti uzviite pasina kubhadhara chero mutero. Ichokwadi kuti mota iri pamusoro pemwedzi mitanhatu uye yakafukidza pamusoro pe6km kubva nyowani. Mukuona kweHMRC chero zvishoma inoonekwa semotokari nyowani, nekudaro iwe unofanirwa kubhadhara VAT - zvisinei, izvi zvinogona muzviitiko zvakawanda zvinogona kubvunzwa kudzoka kwayakabva.
Unogona kuverenga zvakawanda nezvekunze kwemitero pano asi usazeze kupinda mukutaurirana nenhengo yevashandi kuti usimbise kuti imarii yemutero yauchazobhadhara kana yausingazobhadhare kupinza mota yako kubva kuBelgium.
Motokari yeItaly inogadziriswa uye nyora mvumo
Zvemotokari dziri pasi pemakore gumi kubva kuItari, ivo vanofanirwa kutevedzera kuUK mhando yekubvumidzwa. Isu tinogona kuita izvi nemaitiro anonzi kubvumirana kana kuburikidza neIVA kuyedzwa.
Kuruboshwe ruoko kutyaira mota kubva kuItaly kunoda kumwe kugadziridzwa, kusanganisira izvo kune iyo yemwenje pateni yekudzivirira kupenya kweinouya traffic, iyo spidhi yekuratidzira mamaira neawa kuverenga uye neseri mhute mwenje kana isati yatowirirana pasi rese.
Kuunza mota dzeItaly anopfuura makore gumi
Dzinopfuura gumi-makore-makore mota uye zvekare ndeyemhando mvumo isingabvumirwe, asi zvichiri kuda MOT bvunzo uye kumwe kugadziridzwa kusati kwanyoreswa. Iko kunatsurudzwa kunoenderana nezera asi kazhinji kune iwo marambi epamberi uye kumashure kwechiedza mhute. Mota dzinopfuura makore makumi mana ekuberekwa MOT dzinoregererwa kuitira kuti tikwanise kunyoresa izvi zviri kure kwauri.
Isu tinopa iyo yakazara yeItaly mota yekuisa sevhisi
MHANDO DZEMITORI YEMAITALI